‘उत्सव’ हेर्न आईन्छ ???. ‘मन नपरे गाली गर्न पाईन्छ’ « Mazzako Online
‘उत्सव’ हेर्न आईन्छ ???. ‘मन नपरे गाली गर्न पाईन्छ’
‘भदौ १३ गते हलमा आउनुस् मन परेन भने मज्जाले गाली गर्न पाउनुहुनेछ हामीलाई’ चलचित्रका निर्देशकको भनाई यस्तो छ, ‘सौगातजी ले नमान्दै नमान्दै पनि पहिलोपटक उहाँलाई पृथक भुमिकामा उभ्याउने कोशिष गरेका छौ आशा छ तपाईलाई पक्कै मन पर्नेछ’ । चलचित्रको नाम हो ‘उत्सव’ । चलचित्रको निर्देशन कुमार भट्टराईले गरेका हुन् ।
आज राजधानीमा पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रम आयोजना गरि चलचित्रको बारेमा जानकारी गराईएको छ । सो अवसरमा चलचित्रको ट्रेलर पनि सार्वजनिक गरिएको छ । कुमार भट्टराई निर्देशित चलचित्र उत्सवमा संजोग कोईरालाका, सौगात मल्ल, गौरव पहारी, प्रकृति श्रेष्ठ, मेनुका प्रधान लगायतको मुख्य भुमिका रहेको छ । चलचित्रका मुख्य कलाकार संजोग कोईराला निर्माता शेखर कोईरालाका छोरा हुन् ।
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा बाबु पस्ताहरुलाई पछ्याउदै छोरा पुस्ताहरु पनि क्रमशः आईरहेको परिपेक्षमा निर्माता शेखर कोईरालालाई पछ्याउदै छोरा संजोक पनि अन्तत चलचित्र क्षेत्रमा नै आएका छन् । हुन त उनी भारतमा सिए पढेर आएका हुन तर अब भने चलचित्र क्षेत्रमै जम्ने उनको सोच छ । उता चलचित्रका निर्माता शेखर कोईराला पनि छोरोको फिल्म मोहबाट खुशी देखिएका छन् ।
‘दर्शकहरुले नेपाली सिनेमामा देखिईरहको कुराहरु भन्दा केही चिज फरक पाउनु हुनेछ’ निर्देशक भट्टराई बताउछन् ‘युवाहरुले बनाएको सिनेमा भएकाले पनि प्रत्येक कुराहरु नयाँ किसिमले डिजाईन गरिएको छ’ । पहिले आफुलाई सिनेमा भन्ने वित्तिकै साईको टाईपको हुनु पथ्र्यो झै लाग्थ्यो रे निर्देशकलाई तर साईको शैलीको सिनेमाले निर्माताको लगानी डुब्ने उनले बताए ।
दासढुंगा, आचार्य, उमा लगायतका चलचित्रमा स्क्रिप्ट राईटरको रुपमा काम गरिसकेका भट्टराईले उत्सवलाई कर्मसियल रुपमा बनाएको बताए । निर्देशक भन्छन् ‘पहिले पहिले गधाले भारी बोके झै रिलको भारी बोकेर हिड्नु पर्ने जामाना थियो तर अहिले चलचित्र क्षेत्रमा डिजिटल युग आईसकेको छ।’
चलचित्रका निर्माता शेखर कोईरालाले बताए ‘प्रविधि परिवर्तन भएसँगै मैले आफुलाई पनि परिवर्तन गरेको छु, उत्सवलाई मैले पुस्ता हस्तान्तरको रुपमा पनि लिएको छु’ । चलचित्रले दर्शकलाई हलसम्म तान्नेमा निर्माता निकै आशावादी देखिए ।